के तपाईं घरमै बसिबसी चालक अनुमतिपत्र लाइसेन्स लिन चाहनुहुन्छ ? - Nepali in Australia
June 17, 2021 autherLeaveaComment on के तपाईं घरमै बसिबसी चालक अनुमतिपत्र लाइसेन्स लिन चाहनुहुन्छ ?
“हामीले दैनिक ४०० जनालाई टोकन दिने गरेका छौँ। तर कार्यालय खुल्नुअगाडि नै कहिले ७०० त कहिले १,००० जना लाइन बसिसकेका हुन्छन्।” **** यो समाचार को पूरा भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला ****